परीक्षा नै नदिई मेडिकल काउन्सिलको लाइसेन्स !- उपत्यका - कान्तिपुर समाचार
परीक्षा नै नदिई मेडिकल काउन्सिलको लाइसेन्स !
भाद्र २६, २०७८ लीला श्रेष्ठ
काठमाडौँ — नेपाल मेडिकल काउन्सिलले विशेषज्ञ चिकित्सकलाई तथा नेपाल फार्मेसी काउन्सिलले फर्मासिस्ट र फार्मेसी सहायकलाई लाइसेन्स दिन्छ । यस्तो लाइसेन्स पाउन विद्यार्थीले अनिवार्य काउन्सिलको परीक्षा पास गरेको हुनुपर्छ ।
तर विदेशमा चिकित्सा शिक्षा पढेर आएका तर लाइसेन्स लिन नसकेका तथा फार्मेसीमा स्नातक वा प्रमाणपत्र तह नै नपढेकाले पनि काउन्सिलबाट लाइसेन्स लिइरहेको तथ्य फेला परेको छ । महानगरीय प्रहरी परिसर ललितपुरले सोमबार बागलुङ बडिगार्ड–९ का युद्धबहादुर केसीलाई पक्राउ गरेपछि उक्त तथ्य खुलेको हो ।
ललितपुर प्रहरी प्रवक्ता एसपी प्रज्वल महर्जनका अनुसार केसीलगायतले फार्मेसीमा डिप्लोमा गरेकोदेखि फार्मेसी काउन्सिल र मेडिकल काउन्सिलबाट दिइने लाइसेन्ससम्म नक्कली बनाउँदै बेच्ने गरेको पाइएको छ । नेपाल तथा भारतका विभिन्न कलेजबाट फार्मेसी उत्तीर्ण गरेको भन्दै नक्कली प्रमाणपत्र बनाउने र त्यही आधारमा काउन्सिलको लाइसेन्ससमेत नक्कली निकाल्ने गरेको अनुसन्धानबाट खुलेको छ । लाइसेन्स परीक्षाका लागि काउन्सिलले प्रवेशपत्र उपलब्ध गराएपछि त्यसमा रहेको फोटो उप्काएर परीक्षा पास गर्न सक्ने व्यक्तिको फोटो टाँसी परीक्षा दिन लगाउने र प्राप्त लाइसेन्स बेच्ने गरेको भेटिएको ललितपुर प्रहरी प्रमुख एसएसपी किरण बज्राचार्यले बताइन् ।
‘फार्मेसी पासै गर्न नसकेका व्यक्तिको पनि काउन्सिलबाट लाइसेन्स निकाल्दिएर २ देखि ५ लाख रुपैयाँसम्म रकम लिने गरेको केसीले स्विकारेका छन्,’ उनले भनिन्, ‘यस्ता व्यक्तिले औषधि पसल सञ्चालन गरे नागरिकको स्वास्थ्य के होला ?’ उनका अनुसार यो कार्यमा केसीसँगै अर्का एक व्यक्तिको पनि संलग्नता पुष्टि भएको छ । उनी फरार छन् । ‘फरार व्यक्तिको पहिचान भइसकेकाले छिट्टै नियन्त्रणमा लिन्छौं,’ उनले भनिन् ।
केसीको साथबाट नक्कली लाइसेन्स, नक्कली प्रवेशपत्र, फार्मेसी पास परेको नक्कली मार्कसिटलगायत कागजातको डिजिटल कपी बरामद गरेको प्रवक्ता महर्जनले बताए । ‘सीटीईभीटी, नेपाल र भारतका विभिन्न कलेजको नाममा बनाइएका नक्कली कागजात बरामद भएका छन्,’ उनले भने, ‘वैधानिकता जाँचका लागि सम्बन्धित कलेज तथा सीटीईभीटीमा पठाउने तयारी छ ।’
उनीहरूले त्यस्ता कागजात कहाँ र कसरी प्रिन्ट गर्थे भन्ने नखुलेको उनले बताए । केसीको सम्बन्ध असार १४ मा पक्राउ परेका भन्सार छलेर चारपांग्रे सवारी काठमाडौं भित्र्याई बिक्रीवितरण गर्ने र नक्कली प्रमाणपत्र बनाउने व्यक्तिहरूसँग रहेको समेत खुलेको छ ।
प्रकाशित : भाद्र २६, २०७८ १२:०८
सिद्धार्थ राजमार्गको बिजोग
मर्मत अभावमा बढ्यो जोखिम
नाली व्यवस्थित नहुँदा सडकमै बग्छ खोला
भाद्र २६, २०७८ प्रतीक्षा काफ्ले
कास्की — जता हेर्‍यो उतै खाल्डो छ । राजमार्गको अधिकांश खण्ड जीर्ण छ । राम्रो, चिल्लो र पिच सडक कस्तो हुन्छ भन्ने देख्नै मुस्किल भयो,’ पोखरा–स्याङ्जा चल्ने माइक्रो बस चालक दिलीप रानामगरले भने, ‘अब त कहाँनेर कति ठूलो खाल्डो छ ? कुन खाल्डोमा गाडी पास गर्न सकिँदैन भन्नेसमेत सबै थाहा भइसक्यो ।’ सिद्धार्थ राजमार्गअन्तर्गत स्याङ्जा सडकखण्ड पछिल्लोसमय खाल्डाखुल्डीमा परिणत भएको छ । ‘वर्षामा हिलो र हिउँदमा धुलो यहाँको विशेषता नै हो,’ चालक रानाले भने । उनले सडककै कारण सवारीसाधनको आयु पनि घट्दै गएको गुनासो गरे ।
राजमार्गको स्याङ्जा खण्ड कुभिन्डेदेखि राम्दीसम्म ८२ किमि पर्छ । सडकको अधिकांश भाग जोखिमपूर्ण रहेको पुतलीबजार नगरपालिका–१२ का राजेन्द्र शर्माले बताए । ‘राजमार्ग भन्नै नहुने अवस्था छ,’ उनले भने, ‘भल बग्ने पनि सडकमाथि नै, सवारी चलाउने पनि सडकमाथि नै ।’ उनले राजमार्गको पहिरोसमेत विगतका वर्षदेखि नपन्छाइएको बताए । सडकको पहिरो पन्छ्याउने र पानीलाई नालीबाटै बग्ने व्यवस्था मिलाए मात्र पनि सडकको केही अवस्था सुध्रिने शर्माले भने ।
‘खानेपानीको पाइप गाड्ने भनेको छ, बाटो चक्लाउने रे, विभिन्न बहना बनाउँदै सडक खन्दा खाल्डाखुल्डी मात्रै बनेका छन्,’ पोखरा पृथ्वीचोककी माया पोखरेल भन्छिन्, ‘छेउछेउ हिँड्न पनि डरमर्दो छ । सडक खाल्डाका कारण मोटरसाइकल, स्कुटर पेटीमै कुदाउँछन् ।’
खाल्डाकै कारण सवारी दुर्घटना पनि बढी हुने अर्का चालक बाबुराम पोखरेल बताउँछन् । ‘पानीले खाल्डो भरिएको हुन्छ, अनुमानका भरमा गाडी हाल्ने हो,’ उनले भने, ‘त्यसैले पनि जुनसुकै बेला दुर्घटनाको डर रहन्छ ।’ जोखिमसँगै गाडी मर्मतको खर्च पनि बढ्ने उनले बताए । स्थानीय तहले सडक विस्तारमा डोजर लगाए पनि ढुंगा, माटोको व्यवस्थापन नगर्ने गरेको स्थानीयको आरोप छ ।
राजमार्ग संघीय सरकारको भन्दै स्थानीय सरकार पन्छिने गरेको शर्माले बताए । जिल्ला पूर्वाधार विकास कार्यालय स्याङ्जाका प्रमुख लक्ष्मी भण्डारीले राजमार्गको तुलनामा भित्री सडक धेरै राम्रा बनेको बताए । ‘गाउँमा बरु अहिले सडक चिल्ला छन् । राजमार्गको कन्तविजोग छ,’ उनले भने ।
स्याङ्जाको भीरकोट नगरप्रमुख छायाराम खनालले राजमार्ग विस्तार गर्ने भनेर संघीय सरकारले पटकपटक सम्बोधन गरे पनि अहिलेसम्म सडकको अवस्था जस्ताको तस्तै रहेको बताए । उनले भने, ‘स्थानीय तहसँग बजेट छैन, संघले सुन्दैन ।’
राजमार्गमा पछिल्लो समय दुर्घटना पनि बढी हुन थालेको उनको भनाइ छ । ‘राजमार्गको यात्रामा निकै जोखिम छ,’ उनले थपे ।
प्रकाशित : भाद्र २६, २०७८ १२:०४